Pep Guardiola oo doonaya inuu ka tago Bayern Munich - BBC News Somali
Pep Guardiola oo doonaya inuu ka tago Bayern Munich
Guardiola waxaa uu sheegay inuu ka tegayo Bayern Munich si uu macallin uga noqdo kooxaha Ingiriiska ka ciyaara.
Maamulahan hore ee kooxda Barcelona waxaa uu dhowaan sheegay inuusan cusbooneysiin doonin marka uu dhammaado waqtiga shaqadiisa waddanka Jarmalka dhammaadka xilli-ciyaareedkan.
Guardiola oo 44 jir ah waxaa lala xiriirinayay naadiyaal ka tirsan horyaalka Ingiriiska sida Manchester City, Manchester United, Chelsea iyo Arsenal.
Waxaa uu sheegay inuu doonayo inuu barto magaalo cusub, uuna rabo inuu ka shaqeeyo Ingiriiska. Waxaa kaloo uu sheegay in dhowr shaqo loogu yaboohay Ingiriiska laakiin uusan weli waxba saxiixin.
Madaxa fulinta ee Bayern, Karl-Heinz, waxaa uu sheegay in Guardiola uu horeba u ogsoon yahay naadiga uu ku biirayo xilli-ciyaareedka dambe. Hase ahaatee Macallinkan reer Spain waxaa uu maanta sheegay inuusan weli go'aan ka gaarin naadiga uu ka hawl geli doono.
Guardiola waxaa uu ahaa maamulihii ugu guusha badnaa kooxda Barcelona isagoo u qaaday 14 koob muddo afar sano gudahood ah, kuwaas oo ay ku jiraan saddex horyaalka Spain ah iyo laba horyaalka Yurub ah.
Waxaa uu ku guulaystay laba horyaalka Jarmalka muddo laba sano ah oo si buuxda uu ula shaqeynayay Bayern Munich, haatan siddeed dhibcood ayay kooxdiisu ka horreysa tan ugu soo xigta horyaalka Jarmalka, hase yeeshee marnaba uma suurta gelin inuu horyaalka Yurub la qaado kooxda Bayern Munich laba goor ayaana lagu reebay semi-final-ka ama afarta ugu dambeysa.